Kandidà Rajoelina: “Maro ireo tsy mino sy manatsatso antsika ary ny mpanenjika…” | NewsMada
Kandidà Rajoelina: “Maro ireo tsy mino sy manatsatso antsika ary ny mpanenjika…”
I Miarinarivo, Arivonimamo ary teny amin’ny toby Akamasoa indray ny nanohizan’ny kandidà Rajoelina ny fampielezan-kevitra, omaly. « Hataontsika maoderina i Madagasikara. Maro ny tsy mino. Akombony ny vava rehefa tsy mino ianao fa aleo ny olona hiasa. Tsy ataontsika olana ireo manatsatso sy manakivy antsika”, hoy izy. Nanteriny fa na maro aza ny mpanaratsy, tsy maintsy mandroso isika. Betsaka ny tetikasa hataontsika hampandroso ny firenena. Tsy mitovy na ny fitiavan’ny olona na ny fahavitrihana amin’ny famoriam-bahoaka. “Maro ny kandidà fa iray ihany ny afaka hanavotra ny firenena”, hoy izy. Nanteriny fa tsy mba tia manao kabary ambony vavahady ny tenany. Hotanterahina avokoa ny ambara rehetra. Isika tsy mba mandainga na mamitaka sy mangalatra izany… Mila tanora tia tanindrazana ary manana vina ny firenena. Efa vonona sy niomana isika tao anatin’ny dimy taona”, hoy hatrany ny kandidà Rajoelina. Nambarany koa fa ho filohan’ny sokajin’olona rehetra ny tenany.
Tsy mila voninahitra sy vola fa fanasoavana ny vahoaka…
Tsy mahamaika azy ny fahefana na vola na voninahitra fa ho amin’ny fampandrosoana sy ny fanasoavana ny vahoaka, araka ny nambarany. Nanteriny fa hovitaina ao anatin’ny fotoana fohy ny fampandrosoana tsy hita teto hatramin’izay. Niantso fahamalinana ny tenany amin’ny fanisam-bato mba tsy hisy hiala fa hanara-maso izany hatramin’ny farany.
Nitodika amin’ireo kandidà, sadasada manan-tsoratra, ny mpanorina ny IEM. “Maro ireo nirotsaka hofidina. Vonona hiatrika fifidianana matoa nirotsaka. Tsy mbola vonona ho amin’izany anefa ny sasany amin’izy ireo”, hoy izy.
Hanova isika amin’ny 7 novambra satria hanana filoha tanora indrindra aty Afrika, araka ny nambarany.